समाचार - 9BB सौर प्यानल के हो
भर्खरको बजारमा, तपाईले मानिसहरू 5BB, 9BB, M6 प्रकारको 166mm सौर कक्षहरू, र आधा काटिएको सौर प्यानलहरूको बारेमा कुरा गर्दै सुन्नुहुनेछ। तपाईं यी सबै सर्तहरूसँग अलमल्लमा पर्न सक्नुहुन्छ, ती के हुन्? उनीहरू केको पक्षमा छन्? तिनीहरूबीच के भिन्नताहरू छन्? यस लेखमा हामी माथि वर्णन गरिएका सबै अवधारणालाई संक्षिप्तमा वर्णन गर्नेछौं।
5BB र 9BB के हो?
B बीबीको अर्थ bus बस बारहरू, यी चाँदी पट्टिहरू हुन् जुन सौर सेलको अगाडि सतहमा स्क्रिन प्रिन्टि are छन्। बस बारहरू कन्डक्टरको रूपमा डिजाइन गरिएको छ कि बिजुली स collect्कलन गर्दछ। नम्बर र बस बारको चौडाई मुख्य रूपमा सेलको आकार र डिजाइन दक्षतामा निर्भर गर्दछ। इष्टतम अवस्था र सैद्धान्तिक रुपमा भनिएको छ, बस बारमा वृद्धि, दक्षता बृद्धि। यद्यपि वास्तविक अनुप्रयोगहरूमा यस्तो इष्टतम बिन्दु पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ जसले बस बारको चौडाइलाई सन्तुलनमा राख्छ र सूर्यको प्रकाशको छायालाई न्यूनतम गर्दछ। B बीबी कोषहरूसँग तुलना गर्नुहोस् जुन सामान्य आकार १ 156.mm9मिमी वा १88.75mm मीमी छ, B बी बी कोषहरू दुबै संख्यामा बढ्छ र सेलको आकार जुन प्रायः केसहरूमा १mm6 एमएम छ, यस बाहेक, B बीबीले छायाँ घटाउन गोलाकार वेल्डिंग स्ट्रिप प्रयोग गर्छ। यी सबै नयाँ उन्नत प्रविधिहरूको साथ, १66 मीमी B बीबी सौर सेलहरूले आउटपुट प्रदर्शनमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्दछ।
आधा कट सेल सौर प्यानल के हो?
यदि हामीले एक लेजर डाइसि machine मेशिनको माध्यमबाट पूर्ण आकारको सोलर सेल काट्यौं भने, स्ट्रिंग श्रृंखला र समानान्तर तार दुई श्रृंखलामा सबै आधा कक्षहरू वेल्डिंग गर्दै, तिनीहरूलाई अन्तमा एक सौर प्यानलको रूपमा समेट्छ। उर्जाको साथ उही रहनुहोस्, पूर्ण सेलको मूल एम्पीयर दुई द्वारा विभाजित गरिएको छ, विद्युतीय प्रतिरोध समान हो, र आन्तरिक नोक्सान १/4 मा कम भयो। यी सबै कारकहरू सम्पूर्ण आउटपुटमा सुधार गर्न योगदान गर्दछ।
१66 मिमी B बीबी र आधा सेल सौर प्यानलका फाइदा के हुन्?
१: आधा सेल प्राविधिक रूपमा सौर्य प्यानलहरूको शक्ति 5-१० वटाको लागि सुधार गर्दछ।
२: आउटपुट दक्षतामा सुधारको साथ, स्थापना क्षेत्र%% ले घट्यो, र स्थापना लागत%% ले घट्यो।
:: आधा सेल प्रविधि सेलहरूको दरार र बस बारहरूको क्षतिको जोखिम कम गर्दछ, त्यसैले सौर्य एर्रेको स्थिरता र विश्वसनीयता वृद्धि गर्दछ।